घरमै राख्यो आयोजकले उपाधि
मोफसलकै सर्वाधिक धनराशिको नकआउट फुटबल प्रतियोगिता ‘नेपाल आइस अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप’ को उपाधि आयोजक सुदूरपश्चिम–११ स्पोट्र्स क्लबले जितेको छ। प्रतियोगिताको यो चौथो संस्करण हो।
फाइनलमा बलियो प्रतिद्वन्द्वी थ्री स्टार क्लबलाई हराउँदै उपाधि हात पारेको हो। सुदूरपश्चिम–११ ले ‘ए’ डिभिजन क्लब थ्री स्टारलाई १–० गोलले हराउँदै पहिलो पटक उपाधि जितेको हो। प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करणमा पनि थ्री स्टार क्लब नेपाल पुलिस क्लबसँग १–० गोलले नै पराजित भएको थियो।
सुदूरपश्चिमलाई उपाधि दिलाउन विक्रमसिंह ठकुरीले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको अट्ठाइसौँ मिनेटमा गोल गरेका हुन्। प्रतियोगितामा उनले गरेको यो पाँचौँ गोल हो। सुदूरपश्चिमका माधव भण्डारी खेलको ‘म्यान अफ दी म्याच’ घोषित भए। उनले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे।
उपाधिसँगै सुदूरपश्चिमले २१ लाख १ रुपैयाँ पुरस्कार पनि हात पार्‍यो। उपविजेता बनेको थ्री स्टारले १० लाख १ रुपैयाँमा चित्त बुझायो। सुदूरपश्चिम–११ का विक्रमसिंह ठकुरी प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। उनले बेनेली मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त गरे।
गोल्डकपको उत्कृष्ट विधा पुरस्कारमा पनि आयोजक टोलीकै वर्चस्व रह्यो। उदीयमान खेलाडीको पुरस्कार विष्णु चौधरी, उत्कृष्ट रक्षकको पुरस्कार धनराज थापा, उत्कृष्ट प्रशिक्षकको पुरस्कार रोहित भण्डारी र सर्वाधिक गोलकर्ताको पुरस्कार विक्रमसिंह ठकुरीले हात पारे। उनीहरू सबै आयोजक टोलीका खेलाडी हुन्।
थ्री स्टारका पूर्ण चेम्जोङ उत्कृष्ट गोलरक्षक र सुशील राई उत्कृष्ट मिडफिल्डर घोषित भए। सवै विधाका उत्कृष्ट खेलाडीले जनही १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए। विजयी खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल लगायतले पुरस्कार वितरण गरे। सुदूरपश्चिम स्पोट्र्स क्लबले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा दुई विदेशीसहित १२ टोलीको सहभागिता रहेको थियो।
२०७३ सालमा सम्पन्न प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणको उपाधि ‘ए’ डिभिजन क्लब मनाङ मस्र्याङ्दीले जितेको थियो। मनाङ मस्र्याङ्दीले फाइनलमा संकटा क्लबलाई १–० गोलले हराएको थियो। त्यतिबेला पहिलो हुने टोलीको पुरस्कार राशि पाँच लाख रुपैयाँ थियो। पहिलो संस्करणमा मनाङका कप्तान अनिल गुरुङ सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए।
यसै गरी, २०७४ सालमा सम्पन्न दोस्रो संस्करणको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले हात पारेको थियो। फाइनलमा आर्मी क्लबले अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ५–४ गोलले हराएको थियो। उपाधिसँगै आर्मी क्लबले ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ पुरस्कार पाएको थियो। आर्मी क्लबका कप्तान भरत खवास सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेका थिए।
त्यस्तै, नेपाल पुलिस क्लबले २०७५ सालमा सम्पन्न तेस्रो संस्करणको उपाधि हात पारेको थियो। फाइनलमा पुलिस क्लबले थ्रीस्टार क्लबलाई १–० गोलले हराएको थियो। पहिलो हुने पुलिस क्लबले २१ लाख रुपैयाँ पुरस्कार हात पारेको थियो। पुलिस क्लबका रवि पासवान प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए।
खेलकुदको बजेट सन्तुलित कि निराशावादी ?
लकडाउनको साइड इफेक्टः खेलस्तर खस्किने खतरा
१७ जेठ २०७७
लकडाउन झेल्न सघाउन सक्छ ताई–चीले
०९ जेठ २०७७
घरबन्दीमा के छ खबर खेलाडीको ?
ओलम्पिक पनि कोरोनाको शिकार
‘बाहिरिया’सँग भिड्ने मुडमा काठमान्डू